Indlu yaseLwandle, eKoh Chang - I-Airbnb
Indlu yaseLwandle, eKoh Chang
Le ndlu yoyilo intle yangaphambili yolwandle yeyona ndawo ifanelekileyo ' yokubaleka kuyo yonke' ikhaya leholide. Ibekwe kwindawo encinci, yabucala, yoluntu, kanye elunxwemeni, kunye nequla layo lokuqubha labucala kunye nejacuzzi, ilele 6, nazo zonke izinto zangoku.
Umgangatho ophantsi unomgangatho owahlulwe kwaye uphantse wavuleleka ngokupheleleyo, kubandakanya nekhitshi, elineebha zakusasa kunye nendawo yokutyela enetafile yekhonkrithi kunye neendonga zokuhlala. Ecaleni lolwandle, kukho iingcango zeglasi ezityibilikayo zolule yonke ububanzi bendlu ekhokelela kwi-terrace, iJacuzzi ephakanyisiweyo, ichibi lokuqubha labucala, igadi, ulwandle kunye nolwandle.
Kukho igumbi elahlukileyo eliyindawo yokuzivocavoca, enegumbi lokuhlambela elahlukileyo kunye negumbi eliluncedo.
Kukho izitepsi ezi-2 ezikhokelela kumagumbi okulala kumgangatho ongaphezulu. Enye ikhokelela kwigumbi lokulala elikhulu / en-suite enkulu, yolula ubude becala elinye ukuba yindlu.
Isitebhisi sesibini sikhokelela kumagumbi amabini e-en-suite angaphezulu anolwandle kunye nentaba.
4.49 · Izimvo eziyi-67
Le yindawo yokuhlala yabucala. Kukho iivenkile ezimbalwa zasekhaya zezinto ezibalulekileyo ezikufutshane. Unxweme olumhlophe lweSand Beach, iziko lorhwebo lwesiqithi, likumgama wemizuzu engama-20 ecaleni kwendlela entle eselunxwemeni kunye nenduli ephezulu yokuqhuba/ukukhwela. Kukho intabalala yeendawo zokutyela zokwenyani zasekhaya, ngaphakathi kwemizuzu embalwa ukuqhuba / ukukhwela endlwini.
Indlu ijongwe ngumphathi wam uNat. Uya kudibana kwaye akubulise kwaye akubonise malunga neVilla. Ndinomgcini wendlu olungiselela iVilla ngaphambi kokufika kwakho. Ukuba uhlala ixesha elide ukwafumaneka ukuba acoceke ngakumbi ngentlawulo eyongezelelweyo ehlawulwe ngqo kuye.
UNat unolwazi oluninzi malunga neKoh Chang kwaye unokukunceda ukuba wenze konke ukubhukisha, ukuqesha imoto kunye nesithuthuthu, ukuhamba kweendlovu, ukuntywila emanzini, ukuntywila, ukutsiba esiqithini, indawo yokupheka, njl. Ngexesha eliphezulu kuyacetyiswa ukuba ubhukishe kwangaphambili ngenxa yemfuno. Singakwenzela oku.
Indlu ijongwe ngumphathi wam uNat. Uya kudibana kwaye akubulise kwaye akubonise malunga neVilla. Ndinomgcini wendlu olungiselela iVilla ngaphambi kokufika kwakho. Ukuba uhlala ixes…